सुदूरपश्चिम सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति दियो बजेट ? (सूचीसहित) | खबर कुञ्ज
सुदूरपश्चिम सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति दियो बजेट ? (सूचीसहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाएको छ। आकार बढाएर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी हस्तान्तरणबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान भने घटाएको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति दियो बजेट ?